Ungazuza Kanjani Ama-non-Gaming Brands Ngokusebenza Nabathonya Abamageyimu | Martech Zone
Abagqugquzeli bemidlalo yezemidlalo sekuba nzima ukungayinaki, ngisho nemikhiqizo engeyona eyemidlalo. Lokho kungazwakala kungajwayelekile, ngakho ake sichaze ukuthi kungani.
Izimboni eziningi zahlupheka ngenxa yeCovid, kepha imidlalo yevidiyo yaqhuma. Inani lalo likhonjiswe ku- idlula ama- $ 200 billion ngo-2023, ukukhula kunikwa amandla isilinganiso Ama-gamers we-2.9 billion emhlabeni jikelele e 2021.
Umbiko Wemakethe Yomhlaba Wonke
Akuzona izinombolo kuphela ezithokozisayo ngemikhiqizo engadlali, kepha nemvelo eyahlukahlukene ezungeze imidlalo. Ukwehluka kudala amathuba wokwethula umkhiqizo wakho ngezindlela ezahlukahlukene futhi kufinyelele izethameli owake wazabalaza ukuzibandakanya nazo ngaphambilini. Umdlalo wevidiyo we-livestreamer ubalwa njengomunye wemisebenzi yamaphupho ezingane, nemakethe yezokuvakasha okulindeleke ukuthi yenzeke zifinyelele ku-920.3 million abantu abaku-2024. Ukukhuphuka kwama-esports nakho kubalulekile; kulindeleke ukuthi ifinyelele abantu abayizigidi ezingu-577.2 ngawo lowo nyaka.
Cishe i-40% yenani lemidiya eliqhutshwa yimikhiqizo engadlali, ukumaketha kubadlali bamageyimu akunakugwenywa. Inzuzo yokuqala yokuhambisa ibalulekile ukuze ufunde futhi uqonde ukumaketha kwemidlalo ngaphambi kwabaqhudelana bakho. Kepha okokuqala, udinga ukuqonda kahle ukuthi umdlalo ubukeka kanjani ngo-2021.
Ungase ucabange ukuthi ukugembula kuphethwe ngabafana abasebasha abanesikhathi samahhala esingenamkhawulo — kepha lokhu akukwazi ukuqhubeka neqiniso. Ama-83% abesifazane kanye nabesilisa abangama-88% ingahlukaniswa njengabadlali bamageyimu. Futhi yize kuyiqiniso ukuthi ukugembula kuthandwa kakhulu ngabantu abasha, ama-71% abaneminyaka engama-55-64 ubudala nawo ayadlala. Uma kukhulunywa ngendawo, ukugembula kungumhlaba wonke. Ama-45% amaDanes athi adlala imidlalo kuqhathaniswa nama-82% amaThais, kepha umnotho omkhulu emhlabeni uyavumelana ukubandakanyeka ngokuqinile, okuyinto ebalulekile kubathengisi. Izintshisekelo zokudlala kanye nokuncamelayo nakho kuyahlukahluka kuzo zonke izigaba zempilo, ubuhlanga, nokuthambekela kwezocansi.
Ngaleli zinga lokwehluka kwezokudlala, kuyacaca ukuthi izinkolelo ezijwayelekile zendabuko azibambeki. Kepha lokhu kuzuzisa kanjani umkhiqizo wakho ongadlali? Kusho ukuthi uzotholakala abagqugquzeli bemidlalo okulungele ngokwemvelo kuwe.
Inani Lamathonya Wamageyimu Kumikhiqizo Engasiwo Yemidlalo
Abagqugquzeli bemidlalo yokudlala bayayiqonda imboni futhi — okubaluleke kakhulu — isiko lokudlala. Izithameli zabo zingabalandeli abangalukhuni, abazibandakanye kakhulu futhi bembozwe ngokufanayo kuzo zonke izinto zokudlala. Ukugembula kudijithali; ama-gamers bangabasebenzisi bemidiya abakhuthele, abayinkimbinkimbi Amaqhinga womkhankaso akusebenzele ngokwesiko angahle angasebenzi lapha, ikakhulukazi uma ungawasebenzisi. Ingxoxo ka Ukudikiza noma i-YouTube, hhayi I-TV noma imithombo yezokuxhumana. Ukukhangisa emidlalweni kufanele kwenze umqondo wamasiko kungenjalo uzohlukanisa nezithameli zakho, futhi abagqugquzeli bayindlela ephelele yokuqhakambisa umkhiqizo wakho ekugcineni.
Ukusebenzisana nabathonya bemidlalo kukunika ukufinyelela ini? Izethameli ezahlukahlukene ezingatholakali kwenye indawo — ikakhulukazi esikalini esifanayo. Imifudlana yeTwitch imvamisa amahora amade, ngesici sayo sengxoxo ebukhoma esivumela ukuxhumana okungaguquki phakathi kokusakazwa nezethameli. Amageyimu ku-YouTube aqale phansi 100 billion amahora wesikhathi sokubuka ngo-2020, okuyinombolo ecishe ingaqondakali. Kepha akukona konke ngosayizi.
Kuwubuqiniso babathonya bemidlalo obuzwelana nezethameli zabo, okwenza ubudlelwano obuzinikele kakhulu. NgoSepthemba 2020, imboni yezokudlala yabona ukuthi isilinganiso esiphakeme kakhulu sokubandakanya esingu-9% kusuka kuma-nano influencers (1,000-10,000). Abashoshozeli beMega (isigidi esisodwa noma ngaphezulu sabalandeli) babenezinga lesibili eliphakeme kakhulu ku-1%, okuphakamisa ukuthi nosaziwayo bezemidlalo abakhulu bayakwazi ukuyala njalo izilaleli zabo. Okuqukethwe kwemidlalo kuzwakala kungokoqobo kubantu, futhi amathuluzi omdabu afana nengxoxo yeTwitch aklanyelwe ukukhulisa lokho.
Ukuthi Umkhiqizo Wakho Ungasebenzisana Kanjani Nabathonya Bamageyimu
Kunezindlela ezahlukahlukene zokusebenzisana nabathonya bemidlalo. Ngezansi kunezindlela eziyinhloko esizincomayo kumikhiqizo engadlali.
Ukuhlanganiswa Okuxhasiwe - Ukukhulunywa ngomkhiqizo kungukukhwaza okuhle komkhiqizo noma kwensizakalo yakho okuhlanganiswe nokuqukethwe komgqugquzeli. UCloutboost wenze umkhankaso weHotspot Shield VPN ukukhulisa ukuqwashisa ngomkhiqizo nokushayela ukulanda umkhiqizo, exhasa abenamandla kuTwitch Lolu xhaso lweTwitch lubandakanya ukuxhumana ngezinkinga zabo zomkhiqizo oxazululiwe, kanye nokuxoxa ngezinzuzo zomkhiqizo ngokuvamile. Uxhaso lwalufaka izipho, ukufakwa kweHotspot Shield kumabhanela ezikhangiso namalogo, futhi kwasetshenziswa izingxoxo ze-chatbot ejwayelekile ezenzweni.
Umncintiswano we-VPN brand, i-NordVPN, ugxila kakhulu kwezentengiso ezinethonya-ikakhulu ku-YouTube. Uzothola umkhiqizo wabo kuyo yonke indawo yokudlala, kusuka kumathonya amancane wokudlala kuye kuPewDiePie. INordVPN igcizelela i- izinzuzo zesikhathi eside ye-YouTube; izethameli zizobuka ividiyo kusuka ezinyangeni noma eminyakeni eyedlule njengoba i-algorithm yengxenyekazi nesibonisi somsebenzisi kungagxili kuphela kokulayishiwe okusha. Ngokuqhathanisa, amapulatifomu afana neTwitch ne-Instagram agxile kokuqukethwe kwamanje.
I-LG ikhombisa esinye isibonelo sabadlali bamageyimu abakhomba umdlalo ongadlali. Le nkampani inomlando wokusebenzisana nama-YouTubers amageyimu, igqamisa ukuthi i-LG TV ingaba kanjani yindlela enhle kubadlali bamageyimu. Imidlalo ye-Daz idale i- Ividiyo exhaswe nge-LG lokho kuveza umkhiqizo ngendlela engokwemvelo, kunikela ngesibonelo esihle sokuthi imikhiqizo engeyona eyemidlalo ingakhipha kanjani ukuhlanganiswa kwangempela futhi ifinyelele izethameli ezintsha.
Ukupha okunomthelela - Izipho zihlale ziyindlela enhle yokwenza ukuzibandakanya kuzungeze umkhiqizo wakho. I-KFC isebenze ngokubambisana kwezemidlalo nama-Twitch streamers ukunikela ngezithameli izipho zokuthengiswa komkhiqizo namakhadi ezipho lapho ziwina umdlalo. Abasebenzisi bangene ngokuthayipha i-emote ye-KFC (Izithonjana eziqonde ngqo) engxoxweni yeTwitch, nemiklomelo yakhelwe ngokwezifiso ngokomdlalo odlalwayo. Ukukhululwa komkhiqizo wakho umkhiqizo owenzelwe umdlalo kuyindlela enhle yokuwuhlanganisa ngokwemvelo.
Imicimbi Yamageyimu - UHershey usebenzise omunye wemicimbi emikhulu yaminyaka yonke yokudlala, iTwitchCon 2018, kuya khangisa ibha yabo yoshokholethi entsha kaReese's Pieces. Njengoba iTwitchCon ihlanganise ama-streamer amakhulu epulatifomu ndawonye ngaphansi kophahla olulodwa, uHershey uxhase uNinja noDrLupo ngokuhlanganyela okubukhoma. Lokhu kusebenziseka kutholwe ethubeni eliyingqayizivele lokufinyelela kuma-streamer ndawonye mathupha, ngokubambisana kudlala emcabangweni wokuthi uNinja noDrLupo babe yi-duo emangalisayo-njengale kaHershey nekaReese.
Uma ucabanga ukuthi umkhiqizo wakho ususwe kude ekudlaleni imidlalo, ungabe usabheka ukwedlula iMAC cosmetics ukuze uthole ugqozi. I-MAC ixhase iTwitchCon ngo-2019, kuqhutshwa izipho, ukuhlinzeka ngezinsizakalo zokufaka izimonyo, nokuqasha kuphumelele imifudlana yabesifazane njengoPokimane ukudlala imidlalo etendeni labo. IMAC SVP uPhilippe Pinatel ugcizelele ukuthi iTwitch ikhuthaza kanjani ukuzimela nokuzikhulumela emphakathini wayo, izici ezichaza iMAC njengophawu.
Ama-Esports - Ama-Esports yindawo ethile yemidlalo yezobuchwepheshe lapho imikhiqizo ingabamba iqhaza kuyo. U-Aldi noLidl babambisene nezinhlangano ezisebenza ngobungcweti ukuxhasa amajezi nokwenza okuqukethwe ngokusebenzisa ukusebenza ngokuhlanganyela. I-Aldi neTeam Vitality babambisene ukuthuthukisa imiyalezo yomkhiqizo esemqoka ka-Aldi ngokubaluleka kokudla okunempilo, okuyihlanganisa nokufuna unomphela kukaVitality kokusebenza.
Hlangana namaGreets - Njengemicimbi yokudlala, ukuhlangana nokubingelela kunikela ngendlela yokuphakamisa abagqugquzeli bemidlalo ngaphandle kwezwe ledijithali. Isibonelo, hlola Ukuhlangana kwe-Shroud nokubingelela kuZumiez. Ukusebenzisana ngaphakathi kwabantu nabadali bemidlalo yokuqala kudala inani elikhulu futhi kuletha imiphakathi ezinikele ndawonye.
Umkhakha wezokudlala awuselona iqembu elikhethekile langaphambili. Ukugembula kungumhlaba wonke, futhi kumelela amabutho wabalandeli eminyakeni yonke, ubulili, nobuzwe. Ngenkathi imikhiqizo yamageyimu igxile ngokungamangalisi ekumaketheni kwezemidlalo, kunethuba elikhulu lemikhiqizo engeyona eyemidlalo yokwenza inzuzo kubabukeli abebengakatholwa phambilini.
Abagqugquzeli bamageyimu bamelela indlela yokugqama yokufinyelela izethameli zemidlalo. Kunezindlela ezahlukahlukene zokwenza ubuciko futhi ukhiqize ukuqwashisa komkhiqizo nokuthengisa ezungeze umkhiqizo wakho. Khumbula ukugcina engqondweni ukuthi ama-gamers angabathengi abanohlonze. Kubalulekile ukuthi imikhankaso yakho yokugqugquzela amageyimu yenzelwe imboni kanye nabathonya abathile obakhethayo.
Tags: cloutboostimidlalo ye-dazdrlupoama-esportsukufinyelela kwabesifazaneukumaketha umdlaloumthelela wokudlalaukumaketha okunomthelela kumdlaloukuhlanganiswa kwemidlaloHersheyumthelelakfclgLivestreamukudlala bukhomaninjanordvpnreesesukuhlanganiswa okuxhasiweTwitchama-twitch streamerstwitchconyoutubeAmageyimu ku-YouTubezumies